Ciidanka DF oo howlgal qorsheysan ku dilay 13-Xubin oo Al-Shabaab, Qaraxyana fashiliyay | Somalia News
Ciidanka DF oo howlgal qorsheysan ku dilay 13-Xubin oo Al-Shabaab, Qaraxyana fashiliyay
Ciidanka Dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulooyin hoostaga deegaanka bariire ee gobolka shabellada hoose waxaana la sheegay in ay ku soo qabteen qaraxyo ay Al-Shabaab ku diyaariyeen duleedka bariire.
Taliyaha ururka 143 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay in howlgal lagu soo qabtay qaraxyo sidoo kale ay soo saareen qaraxyo ay Al-shabaab ku aaseen Tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire ee gobolka shabellada hoose
Waxaa uu hdalkiisa intaasi ku daray Taliyaha in Howlgalka qaraxyada lagu soo qabtay ay Ciidamada ku dileen Xubno ka tirsan, kuwaasi oo uu sheegay in ay gaarayaan 13 Xubnood.
Ciidamada Dowladda ayaa inta badan howlgallo ka fuliya degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, hayeeshee ay mararka qaar weeraro kala kulmaan Ururka Al-Shabaab.
The post Ciidanka DF oo howlgal qorsheysan ku dilay 13-Xubin oo Al-Shabaab, Qaraxyana fashiliyay appeared first on Somali News Leader.
Previous articleSAWIRRO: QM oo balan qaad muhiim ah u sameysay DF & Qorshaha Doorashada oo..
Next articleDeg Deg Guusha R/wasaaraha cusub, heshiiska Kheyre & Cabdi Xaashi & A.Madoobe oo runta sheegay kadib